Video inay Lugood Converter: Sida loo soo dejinta Videos in Lugood Library Your
Sida loo soo dejinta Videos in Lugood Library
Ma doonaysaa in ay soo dhoofsadaan filim, music video ama guriga in Lugood dibna u hagaagsan u ciyaaro ee iPhone iyo iPad ama wax ka bedel movie Lugood ee iMovie ama Final Cut Pro? Tan iyo Lugood waa mid aad u picky oo ku saabsan waxa ay taageertaa qaabab, fadlan marka hore ka fiiri Lugood ay taageerayaan qaabab file.
Lugood socon File qaabab
Qeybta 1: Sidee-to Import Video (Lugood ay taageerayaan) si Lugood
Qeybta 2: Sidee-to Import Video (Lugood aqlka) si Lugood
Qeybta 3: Video inay Lugood FAQ
Waxaad kaliya jiidi karaan jeedi file ama folder in Lugood. Haddii aad jiidi gal ah, dhammaan faylasha ee folder la keeno doonaa in Lugood. Sidoo kale waxaad riixi kartaa File> Add to Library, caleenta si loo helo galkaada ama folder, ka dibna riix "Open".
Haddii video files ma taageersana by Lugood, aad u baahan tahay si loogu badalo ama video audio ee files si MOV, MP4 ama qaabab M4V. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa dhamaystiran video qalabeed si loogu badalo video ka qaabab kasta oo si Lugood, download online videos in Lugood, iyo xataa xaalkaa aad filimada Lugood.
Beddelaan kasta video in Lugood taageeray qaabab (MOV, MP4, M4V, H.264 iyo MPEG-4).
Beddelaan music kasta si Lugood qaabab ay taageerayaan (MP3, M4A, AAC).
Beddelaan videos la AAN tayada khasaaro, ilaalinteedu video tayada origianl gabi ahaanba.
Guba Lugood video inay DVD in share fiican saaxiibadaa.
Halkan waxaan kuu sheegi doonaa sida loo badalo video in Lugood leh Video Converter Ultimate (for Mac Tusaale ahaan)
Talaabada 1: Jiid jeedi video to this video Lugood Converter
Talaabada 2: Guji "Video" category in ay leeg- ouput ka dooro MP4, MOV, M4V oo dheeraad ah sida qaab wax soo saarka.
Tallaabada 3: Riix ah "Beddelaan" button in convet videos si Lugood.
1. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Lugood video Converter inay kala soo bixi online video in Lugood .
Just riix "Download" tab on sare ee interface software ah, ka dibna paste web aad link adigoo gujinaya batoonka "URL Add" ee dhanka bidix ee sare ee interface .
Tan iyo markii ay online video bixi laga yaabaa in aan ku Lugood qaabka socon, kaliya dajiyaan video ka bixi inay app this, ka dibna raac tallaabooyinka kor ku xusan si loogu badalo in la taageeray by Lugood.
2. app Tani waxay sidoo kale ka shaqayn kartaa sidii xirfadle Lugood video editor . Wondershare Video Converter sidoo kale waa codsi feature-hodan ah diinta fan set oo ah qalab video tafatirka aasaasiga ah. Sida a video editor Lugood, waxa aad u saamaxaaya in ay jar ka soo qayb aan la rabin, baararka dalagga ka soo madow, ratio isbedel arrin ka 4: 3 16: 9 iyo qeybsanaan ku xigeenka, shaandheyn 90 darajo u socoto, anti-bilow dhanka, ku dar fur-in subtitles, codsan saameyn gaar ah, iyo in ka badan. Isku day lacag la'aan ah hadda.
Waxay leedahay interface horyalka Talyaaniga, iyo hawlaha oo dhan waa mid aad u anfacaya iyo fududahay in la isticmaalo. Haddii aad rabto inaad ku biirto dhowr clips galay mid ka mid ah oo dhan, kaliya sax ah "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" sanduuq ee ugu hooseysa. Marka aad buuxiso Lugood video tafatirka, doortaan qaab aad u jeclaystay in uu furmo qaab wax soo saarka, iyo ku dhuftay Beddelaan si aad u hesho doonayso in aad wax soo saarka video.
1. ma ku dari karaa Lugood socon video files sida MP4, MOV, ama M4V in Lugood.
I. Hubi in aad QuickTime lagu rakibay on your computer.
II. Your video codec waa in ay ahaataa Lugood socon (H.264 ama MPEG-4). Just isticmaalaan Video Converter Ultimate si aad video codec adigoo riixaya "Settings" button on xaq hoose ee interface ka.
II. Ciyaaryahanka QuickTime Close ama guuleysatey Lugood in ay isku day ah.
2. waxaan keeno video in Lugood aan qalad, laakiin video ah laga keeno ma laga heli karaa Lugood (Lugood 11).
Waxaad ka raadsan kartaa maktabada Lugood si aad u ogaato movie. Sidoo kale adiga oo video laga yaabaa in "Home Videos" gal, riix badhanka on menu ugu sareysa in aad iska baarto.
3. ma nuqul karaa ama ciyaaro Lugood iibsaday filimada ee aaladaha kale ee sida telefoonka ah Android.
movies Lugood yihiin DRM ilaaliyo. Waxaa kaliya lagu ciyaari karo qalabka Apple. Si aad u ciyaaro aaladaha kale ee aan Apple, waxaad u baahan tahay in ay ka saarto ilaalinta DRM. Waxaad qaadan kartaa Video Converter Ultimate si ay kuu caawiyaan.
Just dajiyaan video Lugood soo galeen app ah, ka dibna ay doortaan qalabka (sida telefoonka Saumsung a) sidii qaab wax soo saarka leh presets, ka dibna waxaa loogu badalo. Markaas video ah la gediyay waxaa la ciyaari doonaa telefoonka Saumsung.
4. ma hagaagsan karaa filimada Lugood si iPhone, iPad, ama aaladaha kale ee Apple.
In kastoo aad ciyaari kartaa video in Lugood, taas macnaheedu ma aha in video ah lagu ciyaari karo aad iPhone ama iPad. Waxa kale oo aad u baahan tahay si ay u eegaan qalabka aad taageerayaan tilmaamaha gaarka casriga ah.
Video Converter Ultimate taageertaa badalo si iPhone, iPad iyo in ka badan. Waxaad isticmaali kartaa presets ah si loogu badalo videos qalabka aad taageeray.
5. Movies lagu ciyaari karo QuickTime laakiin ma lagu dari karaa si Lugood .
Xirto Just ciyaaryahan QuickTime aad, ka dibna jiidi jeedi video in Lugood mar kale.
> Resource > Beddelaan > Sida loo soo dejinta Videos in Lugood Library Your